रायोको साग खेती गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? आउनुहोस खेती प्रविधिबारे जानकारी लिऔं - कृषि पत्रिका
यो ढुसीको कारणले उत्पन्न हुने रोग हो। यस रोगले आक्रमण गरेपछि रायोका जरामा गाँठाहरु विकसीत हुन्छन् र वृद्धि विकास रोकिन्छ । प्रारम्भमा ऐजेरु वा जरामा देखिने वोटको जुकाका लक्षणको आभास हुन्छ।यसको व्यवस्थापनका लागि उही परिवार वाहेकका वालीहरुको घुम्ती वाली प्रणाली अपनाउने, माटोको पि.एच.मान ७ भन्दा वढी राख्ने तथा नेविजिन नामक विषादी १ के.जी. प्रति रोपनिका दरले वालीमा लगाउनु पहिले प्रयोग गर्नु पर्दछ।
रायोसँग अन्तरवालीको रुपमा अन्य वाली लगाउन सकिन्छ ररु अन्तरवालीमा सुहाउने त्यस्ता कुन कुन वाली हुन सक्छन् :
यस रोगले आक्रमण गर्दा सुरुको अवस्थामा स साना हल्का खैरा थोप्लाहरु पातमा देखा पर्दछन्।पछि थोप्ला वढेर ठूला गोलाकार वन्दछन् । वीचको भाग चम्किलो रंगको हुन्छ भने किनारा खस्रो र जीर्ण हुन्छ । यो रोग नलागोस भन्नका लागि डाईथेन एम–४५ वा थिराम २–३ ग्राम प्रति के।जी। वीउमा उपचार गर्नु पर्दछ । खेतीको अवस्था देखा परेपछि वलाईटक्स ५० २–३ ग्राम प्रति लिटर पानीमा मिसाई १०–१५ दिनको फरकमा छर्नु पर्दछ ।
नोट : बीउ र थप जानकारी चाहिएमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ ।।